Wasaaradda Amniga oo amar ku bixisay in shirar siyaasadeed aan lagu qaban karin Hotelada – STAR FM SOMALIA
Wasaaradda Amniga oo amar ku bixisay in shirar siyaasadeed aan lagu qaban karin Hotelada
Wasaaradda Amniga Gudaha ayaa soo saartay amar ku aadan in kulamo siyaasadeed aan lagu qaban karin Hotelada Muqdisho, iyadoo digniin u jeedisay Milkiilayaasha Hotelada.
Tallaabadan ayaa u muuqata mid looga gol leeyahay arrimo siyaasadeed, waxaana xubnaha axsaabta siyaasada ku tilmaameen mid la doonayo in looga hor-istaago ololaha doorashada ee ay wadaan musharaxiinta.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Gudaha C/kaamil Macalin Shugri ayaa faah faahin ka bixiyay amarka ka soo baxay Wasaaradda, isagoo xusay in arrinta aanay aheyn mid siyaasadeed, balse ay la xiriirto arrimo amni.
“Wasaaradda Amniga Gudaha waxaa ka soo baxay amar ah in hadii kulamo la qabanayo ay ka dhacdo goob ammaan ah, iyo in Wasaaradda Amniga lagu soo wargeliyo, si ammaanka loo sugo, ma ahan in arrinta si kale loo dhigo”ayuu yiri Afhayeenka Wasaaradda Amniga Gudaha.
Qoraal todobaadkii hore ka soo baxay Agaasimaha Wasaaradda Amniga ayaa loogu baaqay Hotelada in aan lagu qaban karin kulamo siyaasadeed aanay ka war heyn Wasaaradda, iyadoo hoteladii u hoggaansami waayo amarkaas la faray in tallaabo adag laga qaadi doono.
Xubnaha Axsaabta siyaasada ayaa ku tilmaamay in amarkaas uu ka hor imaanayo dastuurka, maadaama dastuurka uu dhigayo in la qaban karo kulamo, isla markaana lagu soo beegay waqti la galayo doorasho, waxaana si gaar ah arrintan ugu eedeeyeen Madaxweynaha oo isna musharax ah.
Diyaarado dagaal xalay duqeeyay deegaanka Ceel cadde ee Gobolka Gedo
Safaaradda Turkiga ee Soomaaliya oo la wareegtay Xarumihii ay gacanta ku heysay Hey’adda Nile